DAAWO: Wasaaradda Amniga oo Faahfaahisay Qaraxa ka dhacay Muqdisho | Faafan News
DAAWO: Wasaaradda Amniga oo Faahfaahisay Qaraxa ka dhacay Muqdisho
Inta la xaqiijiyay Shan ruux ayaa ku geeriyootay, halka dhaawaca uu gaarayo 10 ruux sida uu xaqiijiyay Afhayeenka Wasaaradda amniga, kadib markii gaari noociisa lagu sheegay Harrier uu ku qarxay wadada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan meel u dhaw Saldhiga Degmada Waaberi oo laamiga dhinaciisa saaran.
Gaarigaan ayaa xilliga uu qarxaayay wuxuu maraayay wadada, waxaana hortiisa iyo gadaashiisa socday gaadiid kale oo wadada isticmaalaayay, laamiga hareerihiisana waxaa fadhiyay dad ganacsi kala duwan iyo sheeko ku haystay.
Mar kaliya ayaa la maqlay jug aad u xooggan oo qaraxa ah, wuxuuna qaraxaasi galaaftay nolosha dad rayid ah oo shaqooyinkoodii maalinlaha ah u joogay wadada dhinaceeda, halka kuwa kalena Bajaaj iyo gaadiid ay saarnaayeen.
Afhayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud, ayaa ku eedeeyay qaraxaasi inay ka dambeeyeen Ururka Al Shabaab oo ay ku xasuuqeen halkaasi dad shacab ah.
Digniin: Video-gan waxaa ku jira muuqaallo naxdin leh. Waa muuqaal la duubay wax yar kadib markii uu qaraxa dhacay maanta